Jeneraal Tuuryare oo shaaciyay inuu ka badbaaday isku day Dil | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Jeneraal Tuuryare oo shaaciyay inuu ka badbaaday isku day Dil
Jeneraal Tuuryare oo shaaciyay inuu ka badbaaday isku day Dil
Taliyihii hore ee hay’adda NISA Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed (Tuuryare) ayaa xalay waxaa Ciidamo ka tirsan dowladda Federaalka ay ku rasaaseeyeen Isgoyska Mirinaayada ee degmada Cabdicaiis ee Gobolka Banaadir.
Jeneraal Tuuryare oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in rasaas lagu furay gaari uu la socday isaga iyo ilaaladiisa, xili ay marayeen Isgoyska Mirinaayada, isla markaana aysan wax dhibaato ah kasoo gaarin falkaas.
Waxaa uu tilmaamay Taliyihii hore ee hay’adda NISA in Ciidamada rasaaseeyay aysan aheyn kuwii degmada Cabdicaiis ka shaqeyn jiray oo ay ahaayeen Ciidamo cusub oo xalay goobtaas la geeyay, kuwaas oo lagu magacaabo Duufaan.
Tuuryare ayaa Carabka ku dhuftay in rasaastaasi ay aheyd daandaansi si ula kac ah loo sameeyay, isagoo xusay in isku day dil uu ahaa falkaasi, isla markaana uu la tashiyo la sameyn doono Saraakiisha Ciidamada.
Ugu dambeyn Taliyihii hore ee hay’adda NISA Jeneral Cabdiraxmaan Maxamed (Tuuryare) ayaa caddeeyay in Guddi loo saari doono dhacdadaas lagana jawaabi doono haddii aan laga jawaabin sababta keentay in gaarigiisa oo la yaqaano in la rasaaseeyo.
Si kastaba dowladda Federaalka ayaa waxaa xalay la sheegay inay Ciidamo farabadan geeysay Isgoysyada Muqdisho, waxaana falkaas lagu rasaaseeyay Jen. Tuuryare uu kusoo aadayaa, iyada uu Madaxeynihii hore ee dalka Xasan Sheekh uu degay agagaarka Isgoyska Mirinaayada.
Maqaal horeMadax weynaha dowlada federalka somaalia maxamed cabdullahi Farmaajo oo gaaray Magaalada Kinshaasa iyo ujeedka safarkiisa
Maqaal XigaWasaarada duulista iyo hawada dowladda Koonfur Galbeed oo magacaawday Maareeye Garoon diyaaradeed